Inside Apple, ọhụrụ akwụkwọ ị na-ekwesịghị ileghara | Esi m mac
Ọtụtụ emeela isiokwu inwere ike iguta nke metutara akwukwo na CBS mere n'okpuru mmemme a ma ama 60 nkeji. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke anyị nwere ike ịhụ etu esi agba ajụjụ ọnụ banyere ọtụtụ ndị isi nke ụlọ ọrụ Cupertino.
Ọ bụghị naanị akwụkwọ akụkọ ọ bụla na ọ bụ na onye nyocha ahụ enweela ike ịbanye n'obi Apple, ụlọ nyocha nke Jony Ive ma ọ bụ ụdị ndụ ụdị nke physicallọ Ahịa Apple nke a na-anwale echiche ndị a ga-etinye n'ọrụ Angela ahrendts.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị mma m hụworo na ndụ m metụtara ime nke Apple. Enweela m oge mbụ m hụrụ ebe ndị isi otu egwuregwu gbakọtara ọnụ. M nwekwara ike lee ebe eji emeputa ihe nile eji meputa ihe a ma mara na ihe a na ere ya bu obere ihe nke meputara na ulo ogwu nke Cupertino.
Anyị na-akwado gị ka ị lelee ihe nkiri vidio ahụ N'ime apụl, dị na weebụsaịtị CBS nakwa na ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya na iPhone ma ọ bụ iPad ị ga-enwerịrị ngwa CBS nke ị nwere ike ibudata ma ọ bụrụ na ịnwe US ​​Apple ID. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịlele Ajụjụ ọnụ ọ bụla Mac site na Safari nchọgharị.
Anyi achoghi ikwusi edemede a na-ekwughi otutu ihe nlere nke ichotara na akwukwo. Onye kacha mara amara bụ onye nrụpụta Jonathan Ive, onye na-anabata onye na-agba ajụjụ na laabu yana emesịa Ya na ya so na Apple Campus 2 ohuru iji gwa ya banyere ihe ohuru nke ulo ahu gha enwe. Ọ na-emekwa ka o doo anya na ngwaahịa ndị na-apụta bụ nsonaazụ nke ọtụtụ ụdị a nwalere tupu ị kpebie nke ị na-aga ire.
Anyị mere ụdị dị iche iche dị iche iche nke iPhone 6 na 6 Plus, anyị wee họrọ abụọ ka anyị weta n'ahịa n'ihi na ọ bụ ha bụ ndị kachasị mma maka anyị ijikwa, nke kachasị mma maka aka anyị.
Banyere Tim Cook, onye na-agba ajụjụ ọnụ na-etinye ya na nkume ahụ ma a bịa n'ahịa Apple Watch, nke ọnụ ọgụgụ ya ka bụ ihe omimi. Ọ na-ajụkwa maka itinye Apple n'ime ụwa ụgbọ ala. Ọ na-ajụkwa ma ọ bụrụ na ha emeziwanye Apple Watch.
O doro anya na anyị nwere ebe kachasị raara onwe ya nye iji meziwanye Apple Watch. Ngwaahịa anyị niile, ewepụtara ya ozugbo, na-arụ ọrụ iji melite ha. Mgbe ụfọdụ, anyị na-arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ nke ngwaahịa ahụ mgbe anyị amalitebeghị nke gara aga.
Ajụjụ ọzọ na-enweghị atụ bụ nke ọ jụrụ n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ụlọ mmepụta ihe nke ngwaahịa ya na China ma ọ bụghị na United States.
Anyị nwere ụlọ ọrụ anyị na China n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka anyị na-ahụ ndị ọrụ kacha mara ọrụ maka ya. Chọọ America maka ndị ọrụ nwere nka maka ụdị ụlọ ọrụ ndị a, ma anyị ga-achọta mmadụ ole na ole imeju ụlọ a. Chọọ ha na China ma ị ga-ejupụta ọtụtụ bọọlụ bọọlụ. Na China, ha na-anata ọzụzụ maka ụdịrị ọrụ a kemgbe ha dị obere.
Onye ọzọ n'ime ndị ọrụ ahụ gbara ajụjụ ọnụ bụ Phil Schiller, na-elekwasị anya onye na-agba ajụjụ ọnụ n'okwu banyere ịgbasa ngwaahịa.
N'ezie, ụfọdụ ngwaahịa ga-eji dochie ndị ọzọ. Mgbe anyị rụpụtara ngwaahịa ọhụrụ anyị chọrọ ka ọ rie ndị ọzọ dị adị, nke ahụ bụ ihe na-egosi na ọ bụ ihe ịga nke ọma. Otu ọ bụla nke Apple chọrọ ka ngwa ahịa ya bụrụ nke kachasị mma, ya na ndị otu ndị ọzọ na-asọmpi. Nke a bụ naanị ụzọ iji mepụta ngwaahịa kachasị mma.
Na-ajụkwa Angela Ahrendts, anyị nwere ike iji ya hụ ụdị ndụ nke Storelọ Ahịa Apple. Na nkenke, akwụkwọ akụkọ ga-eme ka ị hụ ụlọ ọrụ nke apụl bitten nwere anya dị iche iche. Ọzọkwa ekwenyesiri ike na ụlọ ọrụ a chọrọ izu oke na ngwaahịa kacha mma kemgbe mmalite ya, ọ bụ ezie na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọnụahịa ebiliwo nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » N'ime Apple, akwụkwọ ọhụụ ọhụụ ekwesighi ịchefu banyere ins na outs nke Apple
Iji lee ya na ndepụta okwu ????
ajị anụ dijo
Enweghị m ike igwu ya na safari na Mac m ...
Zaghachi na Fur
Etu esi tinye ebe kachasị amasị na Apple Maps